=လူထုကျန်းမာရေး(ဒေါသ သောကနည်းစေရန်နည်းလမ်းများ)=
> .+Public Health+
လူတိုင်းစိတ်ပင်ပန်းရတာ သက်သာအောင်အကောင်းဆုံး လုပ်နည်းကတတ်နိုင်သလောက်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့နည်းပါပဲ။ သွားစရာရှိရင်
လိုက်မယ့်သူတွေကိုကြိုကြို တင်တင် ပြောထားပါ၊ကပ်ပြီးမှပြောရင်ပြင်ဆင်ချိန်
မလောက်လို့စောင့်နေတဲ့အခါမှာ စိတ်တိုတတ်တယ်။ သုံးနေကျပစ္စည်းကို ကြိုကြို တင်တင်ဝယ်ထားပါ၊သုံးချင်တဲ့အချိန်ကျမှ ကုန်နေလို့စိတ်တိုတာမဖြစ်အောင်နော်။ ကတိ အကျွေးတွေဟာစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတယ်၊ဒါကြောင့် . .. ..ကတိ ကို လွယ်လွယ်နဲ့မပေးပါနဲ့။ကတိပေးပြီးမှမတည်နိုင်တဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲ ရတယ်၊
စိတ်တိုရတယ် ၊ကတိမတည်တဲ့သူလို့အပြောခံရတဲ့အခါရှက်တယ်၊ ဒေါသ ဖြစ်တယ်။ မတတ်နိုင်လောက်အောင်မြင့်လွန်းနေတာမျိုးကို မမှန်းပါနဲ့။ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ဟာ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို နဲနဲချင်း
ဖြေးဖြေးမြှင့်ပါ ။ . ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ အချိန်လုံလောက်အောင်စီစဉ်ထားပါ။အရေးမကြီးတာတွေကို အရင်လုပ်ပြီး
ပင်ပန်းသွားတဲ့အခါကျမှအရေးကြီးတာကိုလုပ်ရင်ပိုပြီးစိတ်ပင်ပန်း တယ်။
ဒါကြောင့် အရေးကြီးတာကိုအရင်လုပ်ပါ။ အရေးကြီးတာကို အရင်လုပ်ပြီးရင် စိတ်ပေါ့ပါးသွားလို့သိပ်အရေးမကြီးတာကိုလုပ်ဖို့အားတက်လာမယ် ။
စနစ်တကျလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ထားပါ။ စနစ်ရှိရင် အချိန်ကုန်
သက်သာတယ်၊အမှားနည်းတယ်၊ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းရတာလဲနည်းတယ်။
အဲဒါကြောင့် စိတ်တိုရတာဒေါသဖြစ်ရတာပါ နဲသွားတယ်။ပုံမှန်အချိန်ဇယားနဲ့လုပ်လို့ဖြစ်တာမျိုးကိုသူ့အချိန်ကျရင်
လုပ်ဖြစ်အောင်အကျင့်လုပ်ထားတာကောင်းတယ်။အခုလုပ် ရမလား၊
နောက်မှလုပ်ရမလားလို့ တွေးမနေရတော့ဘူး။အဲဒါကိုက အချိန်ကုန်သက်သာ
သလိုစိတ်ပင်ပန်းတာလဲ သက်သာပါတယ်။ ကိုနေရတဲ့နေရာ၊ ကိုယ်အလုပ် လုပ်တဲ့နေရာကိုတတ်နိုင်သလောက် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်အောင်လှပအောင်ပြုပြင်ပါ။
ရှုပ်ထွေး၊ ညစ်ပတ်၊ နံစော်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာအလုပ်လုပ်ရရင်
စိတ်ကြည်လင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကြည်လင်စေမှုကို ဖျက်စီးတတ်တဲ့အရာမျိုးတွေကို ကိုယ်မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာမရှိပါစေနဲ့။နံရံပေါ်မှာ၊
စာအုပ်စင်ပေါ်မှာ၊ အလုပ်စားပွဲ ပေါ်မှာစိတ်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့
အရာတွေကိုမရှိပါစေနဲ့။ စိတ်တိုစရာကိစ္စ၊စိတ်ညစ်စရာကိစ္စ၊ အဟောင်းကို
အသစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ မထားတာကောင်းတယ်။ကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်အေးချမ်းသွားစေနိုင်တဲ့ ရှုခင်းဓါတ်ပုံမျိုးကိုမြင်သာတဲ့နေရာမှာ ထားပါ။ရေခဲတောင် ဓါတ်ပုံမျိုး၊
ရေကန်ကြီးကြီးဓါတ်ပုံမျိုးကို ကြည့်ပြီးအဲဒိနေရာမျိုးမှာ ကိုယ်ရောက် နေတယ်လို့
မှန်းကြည့်ပါ။ကိုယ်မြင်သမျှ ကြားသမျှအရာတွေဟာကိုယ့်စိတ်ကို လွှမ်းမိုးတယ်။
ဒါကြောင့် မမြင်ရရင်ကောင်းတဲ့ အရာတွေကိုဝေးဝေးပို့ထားပါ၊ဝေးလေးကောင်းလေပဲ။
ပစ္စည်းတွေက ကိုယ့်စိတ်ကို ချောက်ချားစေနိုင်တယ်။ဘာပစ္စည်းမှမရှိရင်
ဘာအနှောက်အယှက်မှ မရှိဘူး။ . အနံ့အသက်ဆိုးတွေ၊ မီးခိုးတွေ၊ ဆူညံသံတွေ မရှိအောင်လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်။မရှိအောင်မတတ်နိုင်ရင်တော့ နဲနိုင်သမျှ
နဲအောင်လုပ်ပါ။ . ကိုယ်ကအောင်မြင်လေလေ ကိုယ့်ကိုတွေ့ချင်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ဆီကအကူအညီတောင်းချင်သူတွေများလာလေဖြစ်တတ်တာ သဘာဝပဲ။တစ်ခါတစ်လေကိုယ်မအားတုန်း အလုပ်များနေတုန်းသူတို့ကတွေ့ချင် အကူအညီတောင်းချင်နေလို့မရမက လုပ်လာရင်လည်း စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်
ရတယ်။ . စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်ရင်သူများအကြောင်းကို တတ်နိုင် သလောက်မပြောပဲနေတာကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့် သူများ မကောင်းကြောင်းကိုမပြောပဲနေတာကောင်းတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပုတ်ခတ်ပြီး ပြောတာမျိုးကိုအထူးရှောင်သင့်တယ်။ ကိုယ်ကသူများ မကောင်းကြောင်းကိုပြောရင်
ကိုယ့်မကောင်းကြောင်း ကိုလည်း သူများကပြောမှာသေချာတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲကိုယ့်စိတ်ကြည်လင်မှုပျက်ရတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကို သူများက
ပြောပြီး သူ့မကောင်း ကြောင်းကိုတော့ ဟုတ်နေရင်တောင်မှမပြောပဲထား
လိုက်တာက ပိုကောင်းတယ်။ ကိုယ်ကသဘောထားကြီးကြီး ထားဖို့လိုတယ်။ . စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာနဲချင်ရင် မလိုအပ်ပဲနဲ့ လူများများနဲ့မရောပါနဲ့။
အခက်အခဲရှိလို့ပြော ချင်ရင်၊ တိုင်ပင်ချင်ရင်တကယ်ကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်မျိုး ပေးနိုင်မဲ့သူကိုပဲပြောပါ။မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုမပြောပါနဲ့။ စိတ်ပျက် စရာကိုပြောတတ်
တဲ့သူတွေကို ဘယ်တော့မှ မပြောပါနဲ့။ စိတ်ပျက်စရာကိုပြောတတ်တဲ့သူကိုပြောရင်
ကိုယ်ပါစိတ်ဓါတ်ကျမယ်။ စိုးရိမ်စိတ်တွေများလာမယ်။စိတ်ပင်ပန်းမယ်။ကိုယ်လုပ်မဲ့
အလုပ်မျိုးကို လုပ်နေတဲ့သူ၊အတွေ့အကြုံ များတဲ့သူမှသာကိုယ့်အခက်အခဲကို
နားလည်မယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူနဲ့ တိုင်ပင်တယ် ဆိုတာကိုသေသေချာချာ
စဉ်းစားပါ။ . အေးအေးဆေးဆေး ပြောတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။ အေးအေးဆေးဆေးလုပ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။အလျင်လိုတဲ့အကျင့်ဟာ
စိတ်ပင်ပန်းစေတယ်။အလျင်လိုနေရင် စိတ်မရှည်ဘူး။အလျင်လိုနေ တဲ့သူဟာ စိတ်တိုဖို့ပိုများတယ်။မှားလို့ပြန်လုပ်ရရင် အချိန်ပိုကုန်တယ်။ဒါကြောင့် “
အရင်လိုရင်အရနှေးတယ်´´ လို့ပြောတာ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေသေချာချာ
တိတိကျကျလုပ်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ဟာရေရှည်မှာ စိတ်အေးချမ်းမှုကိုပေး တယ် ။ . လတ်တလောအဆင်ပြေအောင်လွယ်လွယ်နဲ့ကတိမပေးလိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကို
သဘောကျအောင်ဘာတွေပေးမယ်၊ ဘာတွေလုပ်ပေးမယ်၊ဘယ်လို
အခွင့်အရေးတွေပေးမယ် ဆိုတာမျိုးကိုမစားရ၀ခမန်း မပြောပါနဲ့။ကိုယ်ကို
မပြောပါနဲ့။ပြောတုန်းမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ ပြောပြီး တကယ်လုပ်တဲ့အခါ
ကိုယ်မတတ်နိုင်ရင်မူလက ကိုယ့် စေတနာမှန်ပေမယ့်လည်းကိုယ့်စေတနာကို
တဖက်ကယုံမှာ မဟုတ်ဘူး။ အပြောနဲ့အလုပ်မညီတာတွေများလာတဲ့အခါ
ကိုယ့်စကားကို ကြာတော့ ဘယ်သူမှယုံတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
တကယ်ပေးနိုင်မှ၊တကယ်လုပ်ပေးနိုင်မှပဲ ပြောပါ။ ပေးနိုင် တာထက် နည်းနည်း လျှော့ပြောတာကောင်းတယ်။ အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးညင်းတာခုံတာကို မလုပ်ပါနဲ့။ဘာမှမဟုတ်တာကို ညင်းခုံကြရင်း ရန်ဖြစ်ရတာ စိတ်ဆင်းရဲရတာတွေ တော်တော်များပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့သူဟာ အရေးမကြီးတာတွေကိုကိုသိတိုင်းလည်း မပြောသင့်ဘူး။မေးတိုင်းလည်း
မဖြေသင့်ဘူး။ အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စမှာ သူများမှားနေလည်းသူ့အမှားကို
သူသိလာအောင် စောင့်သင့်တယ်။ကိုယ်မှန်တိုင် ၀င်ပြောပြီး အနိုင် မယူသင့်ဘူး။နိုင်လို့ရတိုင်းနိုင်ချင်တာဟာ မရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်တယ်။
စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ထား၊ သဘောထားကြီးတဲ့စိတ်ထားမျိုးကို
မွေးယူရမယ်။ ဘယ်အလုပ်မျိုးဖြစ်ဖြစ် အဆင်မပြေမှုရှိပါတယ်၊အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်အလုပ်ခက်သလို၊ကျောင်းဆရာအလုပ်လည်း ခက်ပါတယ်။ဈေးရောင်းတဲ့
အလုပ်ခက်သလိုကားမောင်းတဲ့အလုပ်လည်း ခက်ပါ တယ်။ကားမောင်းတဲ့အလုပ်က စိတ်ရှည်ဖို့တော်တော်လိုပါတယ်။ဆရာဝန်အလုပ်လည်း စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်။
လူနာ ရဲ့ အသက်ကို လုနေရတဲ့အခါမျိုးမှာသေးမင်းနဲ့ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်။ လူနာ က အားကိုးတကြီးနဲ့
ကြည့်တဲ့ မျက်လုံရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဆရာဝန်တွေရဲ့ စိတ်မှာပြင်းထန်တဲ့ ကရုဏာကို
ဖြစ်စေတယ်။ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ တွေကလည်းစိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်။
စာမေးပွဲကျတဲ့ကျောင်းသားရဲ့ စိတ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိတော့
အောင်ပါ့မလားဆိုပြီး ဆရာတွေ ဆရာမတွေ သောကဖြစ်ရတယ်။မိဘတွေ
ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ သားသမီး ကို ပညာတတ်စေချင်လို့ ကျောင်းထားတယ်။
စာမေးပွဲကျရင် ဆက်ထားဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ . လူ များများနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်တွေကဆက်ဆံရေးအခက်အခဲ အမြဲရှိပါတယ်။ လူတိုင်းကို
စိတ်ကျေနပ်အောင်ဘယ်သူမှ လုပ်မပေး နိုင်ဘူး။မကျေနပ်တဲ့သူက အပြစ်တင်မယ်၊ မကောင်းပြောမယ်။အဲဒီအခါ စိတ်တိုမယ်၊ ဒေါသဖြစ်မယ်၊စိတ်ဓါတ်ကျမယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကို ကြိုတင်ပြီးတွေးထားပြီးတော့ဒီ အခက်အခဲမျိုးကတော့တွေ့ရမှာသေချာတယ်၊ဒီလိုအပြောမျိုးတော့ ခံရမှာသေချာတယ်၊
ဒါကြောင့် အခက်အခဲ နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါ၊ အပြောခံရတဲ့အခါ စိတ်မပျက်ဘူး၊ စိတ်မညစ်ဘူ။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားမယ်လို့မကြာခဏ နှလုံးသွင်းပါ။ လူတွေပေါ်မှာ တတ်နိုင်သလောက်
စိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ။ သူတို့ကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားပါ။ဒေါသအလျောက် နာသွားအောင် မပြောပါနဲ့၊ကိုယ့်စေတနာက မှားနေရင် ကိုယ့်စေတနာကကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးမှာပါပဲ။
ပြဿနာ တော်တော်များများဟာဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေလို့ ဖြစ်ရတာပါ။တစ်ယောက် ပြောချင်တာကိုတစ်ယောက်ဆုံးအောင် နားမထောင်ရင်တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်
နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။တစ်ယောက် စကားကို တစ်ယောက်အဓိပ္ပါယ်မှန်အောင် မကောက်နိုင်ရင်အထင်လွဲတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့် ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေချင်
ရင်တဖက်သား ပြောချင်နေတာကို ဂရုတစိုက် နားထောင်ပါ။ . သူ့စိတ်ထဲမှာ
ပြောချင်နေတာကို ပြောခွင့်ပေးပါ။အထူးသဖြင့် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်
အထင်လွဲတာမဖြစ်ဖို့ ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်။သူပြောချင်နေတာကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
ပြောနိုင်အောင်သူ့ကို မေးခွန်း တွေမေးပြီး ရှင်းခိုင်းပါ။သူ့အခက်အခဲကို ကိုယ်က ကိုချင်းစာပါတယ်ဆိုတာကို သူသိအောင်ပြောပါ။ . တစ်ယောက်ရဲ့ အခက်အခဲ ကိုတစ်ယောက်ကူညီပြီးနေသွားရတာ ကျေနပ်စရာသိပ်ကောင်းပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တစ်ကယ် နားလည်မှုရသွားရင် စိတ်သက်သာမှု
ရတယ်။ကိုယ့်ဘ၀မှာ အရေးပါတဲ့သူရဲ့ အထင်လွဲမှုကို ခံရတာ စိတ်ဆင်းရဲစရာ
သိပ်ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အထင်လွဲနေရင် လေးလေးစားစားဆွေးနွေးပါ။…
Credit : ဦးဇောတိက (မဟာမြိုင်)